Beautiful ezitebhisini - kuba ikhadi lebhizinisi yokuqala iyiphi emzini womzalwane. Kodwa iyingxenye ye ukubiya, okuyinto imisebenzi eyisisekelo nje kuphela kodwa futhi ukunikeza isici esihle zokuhlobisa. Ngokuvamile, iladi - lena isici elikuvumela ukuhambisa phakathi izibuya. Kepha guardrails, benza ukunyakaza ephephile. Ngaphezu kwalokho, kusukela izinto idatha kuncike futhi ukubukeka inhlangano. Ngakho, indlela yokwenza isimo ezisebenza ngoba izitebhisi ngezandla zakhe ngaphandle kwenkokhiso?
Ngo inqubo yokudala imikhiqizo enjalo kumele athobele ukunemba okuphezulu hhayi kuphela kulesi sibalo, kodwa futhi ekufezeni yimuphi umsebenzi. Phela, izingxenye ngabanye kufanele zitholakale ezingeni elithile. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwenza ezihlukahlukene izakhi ezikhangayo futhi amaphethini. Yiqiniso, kufanele ungesabi ukwenza handrails ngoba izitebhisi. Ngokhuni futhi ukubiya metal uvumele ukuhlobisa isakhiwo, into esemqoka - ukuqinisekisa ukuvumelana e senqubo yokukhiqiza.
Ukukhetha impahla kwesokudla
Ngaphambi kokuqala ukukhiqizwa isimo ezisebenza, kufanele sithole Hlobo luni lwezinto ezivela kuyo abenza babe ngcono. Khetha omunye umhlabeleli ukuthi kufanelekile kakhulu ingaphakathi endlini.
handrails kokuzihlanganisa ngoba izitebhisi athandwa kakhulu. Phela, nabo basuke libukeke kakhudlwana futhi muhle. Umklamo ngeke uvumelane ngokuphelele kunoma iyiphi elingaphakathi. Nokho, ukuze wenze siqu kakhulu kuyinkimbinkimbi futhi akubona bonke abo angenza.
Kubukeka ukubiya omkhulu ezenziwe ngokhuni yemvelo. Bona ingenziwa cishe noma yikuphi okubalulekile. Kumele kukhunjulwe ukuthi noma yiluphi uhlobo lokuthokoza izinkuni has iphethini yaso ehlukile enhle kanti iphunga ekhexisayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi isakhiwo esinjalo kufanelekile ngisho amakamelo, ahlotshiswe isitayela yesimanje kakhulu.
Ukukhiqiza handrails ngoba izitebhisi, cabangela ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Okokuqala, lena ukuphakama kanye namandla we isakhiwo. Uma izingane zikhona, imikhiqizo Kuyoba Noma ngabe yikuphi kube kuncike ahlolelwe Amazing. Futhi, okokuqala kunakho konke, ingane izohlola amandla lomkhiqizo, beya phansi banisters noma shaking nabo. Ngaphezu kwalokho, ingxenye engezansi wesitimela kumele kwenziwe ukuze izingane akakwazanga ukuthola ngokusebenzisa phakathi izingxenye zalo.
Ngokuqondene ukuphakama, lapho kufanele ucabange phezu ngokucophelela. Ochwepheshe batusa ukwenza handrail ngoba izitebhisi ukuphakama okungenani 90 amasentimitha. Yiqiniso, lena akuyona umkhawulo. Ukuphakama elikhulu umkhiqizo kumuntu ngekukhula 180 cm - 120 cm.
Ingaphezulu isakhiwo siphelile liyadingeka ukuze abe bushelelezi. Uma ezitebhisini lincane kakhulu, kungenzeka ukufaka umgoqo ohlangothini olulodwa kuphela. Uma ububanzi amandla olukhulu kunalolu 125 ngamasentimitha, le isimo ezisebenza kufanele afakwe nhlangothi zombili. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukubala ibanga phakathi balusters. Uma endlini izingane siphile, izikhala phakathi izingxenye akumele ibe ngaphezulu kuka-15 amasentimitha.
Yini edingekayo ukuze isimo ezisebenza kokuzihlanganisa
Yiqiniso, lezi isimo ezisebenza ziyabiza kakhulu futhi zidinga amakhono athile. Nokho, babheka zikanokusho okuningi kuka izinkuni. Ukuze bahlangane izakhiwo ezinjalo uzodinga:
Bulgarian ne Imibhobho esemzimbeni.
Kulokhu-ke kungcono ukusebenzisa impahla nge encane cross-section. Lokhu kuzokuvumela ukuba usike noma yimuphi iphethini. Akubalulekile ukuba enze into enzima. Kungcono ukukhetha iphethini elula. Indawo kufanele embozwe impahla ekhethekile, okuyinto kuzokwenza izitebhisi ngalé. Uma ukucabanga iphethini, udinga sinqume. Qaphela ukuthi kungasebenzi ukusebenzisa ekhaya uphondo. Ngakho-ke, eguqa ozokufunda kuzokusiza unomkhuhlane.
Ukuze uxhume izingxenye ngabanye kufanele Welding umshini. Okokuqala udinga ukufaka uzimele kocingo, bese usigcwalisa imininingwane iphethini. Ngemva kokufaka ngamunye kudingeka kuhlanzwe umthungo, kanye ibhulashi kungaba ukulolonga uhlevane, ukuqeda zikhubazeke futhi asuse ukugqwala. Kuphela ngemva kwalokho isakhiwo kungenziwa embozwe upende.
Yini edingekayo ukuze ukubiya lokhuni
Ukuze wenze handrails ezinhle izitebhisi, kudingeka alungiselele nje kuphela ngendaba, kodwa futhi amathuluzi. Ngakho, isidingo:
Ukufakwa kokumqoka kuphela.
Level, yomthofu wokumisa, ukwakha ekhoneni metal.
isando ababili. Omunye - of kobukhulu ngokulinganisela, kanti eyesibili - ukukhanya.
Ngaphambi kokuba uqale umhlangano ukwakhiwa, udinga ukuqoqa wonke izakhi ezibalulekile. Ngakho -ke balusters futhi handrails ngoba izitebhisi. Ezicijile, isimo ezisebenza kanye desirably wenza ukwaziswa okufanayo.
Balusters - uprights, okuyinto iyadonswa ngqo handrail. Ibanga esiphezulu phakathi izingxenye - 15 amasentimitha.
Handrails - lena ingxenye ukubiya, okuyiwona umuntu ophethe.
Ukuphela futhi rotary amatafula - Racks okuhlala isikhathi eside ukuthi ngokuvamile efakwe thwi. Ukukhweza idatha izinto Kwenziwa ekupheleni futhi ekuqaleni ukwakhiwa, kanye cornering.
Design izici iqoqo
Ukubiya inhlangano inqubo ngokwalo incike impahla okuvela ngazo zenziwa. Uma kocingo senziwa metal, uxhumano izingxenye ngabanye ukuze zibe yisikhungo esisodwa zenziwe kusetshenziswa umshini Welding. Ngaphandle kokuba une isipiliyoni ekufezeni imisebenzi enjalo, kubalulekile ukuba bafune usizo lobuchwepheshe.
Uma handrails ngoba izitebhisi kukhona sokhuni, isidingo yokuxhuma izingxenye screwdriver. Ekuqaleni esithathwa kwesigaba Amabha ezahlukene kanye Jigsaw kusetshenzwe. Leli thuluzi kwenza kube nokwenzeka ukunikeza imininingwane eqondile ukuma edingekayo kanye iphethini ukusika. Yiqiniso, lokhu kungase kudingeke emva ngamunye ukugaya isakhiwo isinqamu. Khona-ke ungaya ngale inhlangano.
Handrail ngoba izitebhisi kungcono ukuqala kokufaka esibulalayo ezinezikhoxe obandayo. Kuyinto kusuka la maphuzu kungasisiza ingasicasula phakathi nawo wonke ukusebenza. Ekuqaleni, kufanele lezi zinto efakwe ekuqaleni nasekupheleni isakhiwo, kanye amajika.
Khona-ke ungakwazi kwenye ezinezikhoxe ukulungisa intambo welulele ke phakathi kwezinye amatafula. Lokhu kuzokwenza ukucacisa indawo esiqondile handrail.
Ngemva ezinezikhoxe ezifakiwe futhi tensioned therebetween lace, ungakwazi ukuhlonza labo amaphuzu lapho baluster izokwenziwa. Ibanga phakathi kwazo kungenzeka Yiqiniso, ngaphandle kokubonisana nomkayo. Nokho, ochwepheshe batusa ukubeka imininingwane idatha kokwakhiwa nomunye ngamasentimitha 20 nje. Kulesi ukufakwa okuqhubekayo futhi wamukelekile.
Vikela balusters kungaba hhayi kuphela izinyathelo, kodwa bowstring, okuyinto Babambelela esiteji. Esimeni sesibili, wena uzokwenza isaha cut encane. Balusters zixhunywe thwi.
Ukuze handrail ngoba izitebhisi ukuthi ithembeke, ungawasebenzisi izinzipho zokuthola izingxenye ngabanye. Lena ukungasebenzi kahle. imiklamo Okufanayo Uzithukululile ngokushesha okukhulu. Kungcono ukusebenzisa i nezikulufi obandayo noma ingcina ekhethekile.
Indlela ukufaka handrails izitebhisi lokhuni
Ngemva kokufaka balusters kufanele unamathele wesitimela. Ukuze wenze lokhu, ungenza anemifantu ekhethekile. Lokhu kuzokwenza kakhulu lula inqubo ukwakhiwa kwebandla. On the egoba ezitebhisini ukuze ukufakwa eziqinile kuyadingeka ukwenza ushintsho ekhethekile, futhi ngiyofaka imininingwane engela ezithile.
Ngemva kwalokho, njengoba balusters futhi handrails kufanele kube putty izofakwa zonke izimbobo ukusula zonke evele kusuka izintuli nokungcola. Kodwa ukukhubazeka sanding kangcono. isakhiwo ohlanganisiwe kuyadingeka ukushiya isikhashana, kuze kube yilapho yome ngokuphelele. Kungemva kwalokho uqhubeka yokugcina izitebhisi kokuqeda futhi isimo ezisebenza, esakhiwa ekusebenziseni upende varnishes.
I handrail ngoba izitebhisi ngomumo. Uma ufuna ukugcizelela ubuhle bemvelo bokhuni iphethini, kufanele ayeke upende. Kulokhu, zonke evele ukuba camera nge ukuvenisha okuyisipesheli senzelwe phansi amapulangwe aphansi.
Priming koqweqwe lwawo ku nokugqwala 3 kuya ku-1: Ukucaciswa nezilinganiso
PC slabs - kwagcizelela ukhonkolo eziveza amapuleti
Kanjani futhi yini alinganise dynamometer? Sithola ndawonye
Kanjani ukubhala futhi beka ukunikezwa
Decoupage amasu ku ifenisha Wabasaqalayo
EBulgaria, Sunny Beach, i-Action amanzi ipaki: incazelo, amanani, izithombe kanye nokubuyekeza
Zokuxhumana ngezihloko: definition, izici futhi amaqiniso athakazelisayo